FANDALOVAN’NY COVID-19 : Noentanin’ny Prefe ho tony ny mponin’i Mahajanga
Olona miisa 22 no nampanaovina fitiliana eto Mahajanga, ny herinandron’ny 10 mey iny. 22 mai 2020
Ny 20 amin’izy ireo mpamita iraka ary olona roa kosa mponina eto Mahajanga nahitana soritr’aretina. Ny 12 avy amin’ny mpamita iraka dia avy amin’ny Minisiteran’ny rano ary valo avy amin’ny Minisiteran’ny fitsarana. Nomena soso-kevitra izy ireo hoe mandra-pivalin’ny fitiliana dia mihiboka aloha ianareo. Rehefa nivaly ny fitiliana dia iray tamin’ireo valo iraky ny Minisiteran’ny fitsarana no nitondra ny tsimok’aretina Covid-19.
Nalefa avy hatrany any Anosiala Antananarivo ilay iray nitondra ny tsimokaretina, fa ny fito namany kosa dia naterina any amin’ny Village Voara, any Antananarivo ihany, ka ny Emmo Reg Mahajanga no nanatitra azy ireo.
Nandray fepetra kosa ny CCO-Covid eto Mahajanga ka ireo toerana rehetra nalehan’ireo olona ireo dia namendrahana fanafody mamono otrik’aretina avokoa. Ny olona mety nifanerasera tamin’izy ireo kosa dia nanaovana fitiliana, ka ny faran’ny herinandro izao no ho azo ny valin’izay fitiliana izay. Hatreto moa dia mbola tsy maintsy alefa any an-drenivohitra izany.
Manoloana izany dia manainga ny mponin’i Mahajanga mba ho tony ny prefen’i Mahajanga, Ravelomahay Lahiniaina ary indrindra manentana ny rehetra hanaraka ny toromariky ny CCO nasionaly. “Nandalo soa aman-tsara teto Mahajanga ny Covid-19 ka tokony ho mailo isika, ka hanamafy ny fanajana ny fihetsika fiarovana sy hanaja koa ny elanelana mba tsy hipariahan’ny valanaretina eto Mahajanga”, hoy hatrany izy.
Manamafy kosa ny tonia mpampanoa lalàna ambony eto Mahajanga Antoine fa tsy mpiasan’ny Fitsarana na any Antananarivo na eto Mahajanga na any amin’ny minisitera ireo mpamita iraka avy amin’ny Fitsarana fa olona avy amin’ny tsy miankina namita iraka manao asa amin’ny fanamboarana solosaina ‘installation éléctronique’ eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana sy ny ara-bola. Nambarany hatrany moa fa tsy mbola niditra tao amin’ny biraon’izy ireo mihitsy ireto iraka ireto fa nangatahana taratasy manamarina fa tsy mitondra otrik’aretina. Noho izy ireo tsy nanana izany dia nalefa nanao fitiliana tany amin’ny hopitaly manara-penitra ary nambara azy ireo fa miandry ny valin’ny fitiliana vao afaka miditra ny toeram-piasana.
Rehefa nivaly moa ny fitiliana dia fantatra fa nitondra tsimokaretina ny iray tamin’izy ireo. Na izany aza dia miverina ho fiandrasan-draharaha na ‘service minimum’ ny eny amin’ny Fitsarana rehetra eto Mahajanga.
Nanao fanamarihana ihany koa ny hotely eny Antsanitia, Antsanitia resort fa tsy tany amin’izy ireo mihitsy ireto mpamita iraka ireto satria nihidy foana izy ireo hatrizay ka ny alahady teo vao nisokatra.